एनआरएनएलाई सबै कुराबाट सक्षम बनाएर हाक्न सक्ने म मात्रै हुँ:- डा. बद्री केसी, अध्यक्षका प्रत्यासी « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : १३ भाद्र २०७८, आईतवार १५:१७
गैह्रआवासीय नेपाली संघ ‘एनआरएनए’को महाधिवेश अक्टोबर २३ देखि २५ सम्म हुन गइरहेको छ । यसपटक अनलाइन भोटिंङबाट निर्वाचन हुने भएको छ । त्यसकारण यो महाधिवेशनले धेरै उत्साह थपेको छ। एनआरएनएमा रहेर विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको हकहितका लागि आवाज उठाउँदै आएका डा.बद्री केसी संघको अध्यक्षका उम्मेद्वार हुन् । हाल संघका उपाध्यक्ष तथा वैदेशिक रोजगार तथा कल्याणकारी विभागका प्रमुख समेत रहेका डा. केसी विगत ३१ वर्षदेखि रसियामा बस्दै आएका छन् । डा. केसीले सुरुवातीकालदेखि नै विदेशमा बस्ने नेपालीहरुका लागि काम गरिरहेका छन् । अब हुने एनआरएनएको महाधिवेशमा उनको उम्मेद्वारी तथा आगामी योजनाका बारेमा गरिएको कुराकानीको अंशः
लामो समय कोरोना भाइरसको कारणले नेपाल आउन पाएको थिएन । नेपाल सरकारसँग संस्थागत कुराहरु पनि तय गर्नुपर्ने छ । र, गैर आवासीय नेपाली संघ ‘एनआरएनए’को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महाधिवेशनको तयारीका लागि पनि म काठमाडौं आएको हुँ।
हाम्रो आठ वटा विभागहरु छन् । जसमध्ये वैदेशिक रोजगार तथा कल्याणकारी विभागको म प्रमुख हुँ । यो विभागमा चारवटा उपकमिटीहरु छन्। यी कमिटीमध्ये पहिलो वैदेशिक रोजगारमा गएका साथीहरुको समस्या केलाएर नेपाल सरकारसँग लबिंग गर्ने, हाम्रो संविधानमा गैर आवासीय नेपालीहरुलाई सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकारसहित नागरिकता दिने भनेको छ । त्यो नागरिकता हामीले पाएका छैनौं । त्यसको लबिंग गर्ने, त्यस्तै, गैर आवासीय नेपालीहरुका लागि छुट्टै कानुन बन्ने छ त्यो कानुन बनाउनका लागि पनि मैले लबिंग गरिरहेको छु र विदेशमा रहेका नेपालीहरु जो महामारीको चपेटमा पर्नु भएको छ । उहाँहरुको लागि हामीले थुप्रै काम पनि गरिरहेका छौं।
आजको दिनसम्म एक लाख १० हजार जना संक्रमित भइसक्नु भएको छ । संघले हरेक व्यक्तिको तथ्यांक राखेको छ। ४ सय ८६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने करिब ९२ प्रतिशत संक्रमणमुक्त भइसक्नु भाछ । पहिले जस्तो भयावहको अवस्था छैन। अहिले सबैजना कोरोनासँगै अघि बढ्न सिकिसक्नु भएको छ। यस्तै, सबैले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसक्नु भएको छ। त्यसैगरि, गैर आवासीय नेपाली संघले नेपालमा खोप तथा अक्सिजन ल्याउन धेरै पहल गरेको थियो। त्यही अनुरुप काम पनि भयो।
गैर आवासीय नेपाली संघको अभियान सुरु गर्दादेखि नै म यहाँ छु। सुरुका दिनमा म साधारण सदस्य मात्र रहेर काम गरे। २००७ मा रसियाको महासचिव थिए। त्यसपछि दुई कार्यकाल म केन्द्रीय सदस्य भए। २०१३, २०१५ मा कोषाध्यक्ष थिए। त्यसपछि दुई कार्यकालमा म महासचिव भएर काम गरे। त्यसपछि २०१९, २१ मा म उपाध्यक्ष छु। त्सकारण मैले एनआरएनएमा नसम्हालेको पद छैन। मैले यो सबै पदमा जितेर आएको छु। त्यसैले एनआरएनएमा रहेर थुप्रै काम गरेको छु। यो संघको विभिन्न पदमा रहेर कामलाई निन्तरता दिँदै आएको छु। त्यसैले कुनै चर्चा पाउनका लागि होइन मेरो दावेदारी वास्तविक हो।
संस्थालाई आर्थिक रुपले कसरी लैजाने भन्नेमा म कन्फ्युज छैन। किनभने यो संस्थाको जन्म भएको दिनदेखि म यस संस्थामा छु। यहाँ रहेर धेरै दुःखका दिनहरु पनि देखेको छु। २०१३ सालमा हामीले हाम्रा सचिवालयका सदस्यहरुलाई तलब खुवाउन पनि चन्दा उठाउन पर्थ्यो। म त्यो बेला कोषाध्यक्ष थिए। यस्तो खालको सामाजिक संस्थालाई आर्थिक रुपले सक्षम बनाउन सक्ने १० वर्षे योजना मैले बनाए।
र, यहीं योजनाकै क्रममा भिजन २०२० पनि लिएर आएँ र आज यो संस्था एक वर्षमा ५० करोडको च्यारिटीको काम गर्न सक्ने भएको छ। त्यसैले संस्थालाई कसरी आर्थिक रुपले सक्षम बनाएर लैजाने भन्नेमा म कत्ति पनि कन्फ्युज छैन। यो संस्थालाई सबै कुराबाट सक्षम बनाएर संस्था हाक्न सक्ने मापदण्ड म मा छ।
यस्तै, म कोषाध्यक्ष भएर काम गर्नु भन्दा पहिले केन्द्रीय सदस्य भएर काम गर्दा संस्थामा ४०,४५ वटा मात्र देशहरु थिए। त्यसपछि म महासचिव भएर काम गर्दा कमसेकम ३० वटा नयाँ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् खुल्यो। यसरी म महासचिव हुँदा कसरी धेरै भन्दा धेरै देश तथा नेपालीहरुलाई आबद्ध गर्ने भन्नेमा विषयमा मेरो ठूलो योगदान रह्यो। सुरुमा हाम्रा साधारण सदस्यहरु कम थिए। अहिले १ लाख १० हजार साधारण सदस्यहरु मात्र छन्।
म महासचिव हुँदा म लगाएत मेरो टीमले एकदम उत्कृष्ट काम गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमा केके समस्या छन् भनेर हामीले एक हप्ता अघि मात्र श्वेत पत्र जारी गरेका छौं। अब अर्को उपाध्यक्ष आउँदा अलमल हुनु पर्दैन। यी आठ वटै विभाग, ४० वटा कमिटीहरु र ८४ वटा देशहरुलाई म कन्ट्रोल गर्न सक्छु। र, ती देशहरुमा बसेका नेपालीहरु पहिले आफैं सक्षम हुनुपर्छ अनि नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ यी सबै कुराहरुलाई व्यवस्थापन गरेर म लैजान सक्छु भनेरै मैले अध्यक्ष पदको लागि आँट गरेको छु। साथीहरुले मलाई जिताउनुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
प्रदेशका काममध्ये वाग्मती अगाडि छ : आन्तरिक मामिलामन्त्री